Yɛsom Onyankopɔn a Ne “Mmɔborɔhunu Dɔɔso” | Ɔwɛn-Aban Adesua
Ɔwɛn-Aban—Nea Adesua Nsɛm Wom | October 2021
KENKAN WƆ Afrikaans Aja Akha Albanian Alur Amharic Amis Arabic Armenian Armenian (West) Assamese Aukan Baoule Basque Bassa (Cameroon) Batak (Karo) Batak (Simalungun) Batak (Toba) Belize Kriol Bengali Bicol Bislama Boulou Bulgarian Cakchiquel (Western) Cambodian Catalan Cebuano Chichewa Chiga Chin (Hakha) Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitonga (Zimbabwe) Chitumbuka Chiyao Chokwe Chol Chopi Chuabo Cibemba Cinyanja Croatian Czech Damara Dangme Danish Douala Drehu Dutch Efik Emberá (Catío) English Estonian Ewe Fante Fijian Finnish Fon French Ga Garifuna Georgian German Gitonga Gokana Greek Greenlandic Guadeloupean Creole Guarani Guianese Creole Gun Haitian Creole Hausa Havu Hebrew Hiligaynon Hindi Hiri Motu Hmong (White) Hungarian Hunsrik Iban Ibinda Icelandic Idoma Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Javanese Kabiye Kabuverdianu Kachin Kannada Kanyok Karen (S'gaw) Kikamba Kikongo Kikongo ya Leta Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinande Kinyarwanda Kipende Kirghiz Kirundi Kisi Kituba Kongo Korean Krio Kurdish Kurmanji Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kurdish Kurmanji (Cyrillic) Kwangali Kwanyama Kyangonde Lahu Laotian Lari Latvian Lendu Lhukonzo Lingala Lithuanian Lolo Low German Luganda Lunda Luo Macedonian Macua Makhuwa-Shirima Malagasy Malay Malayalam Maltese Mam Mambwe-Lungu Manyawa Mapudungun Marshallese Mashi Mauritian Creole Maya Mazatec (Huautla) Mbunda Mingrelian Mixe (North Central) Mixtec (Guerrero) Mizo Mongolian Motu Myanmar Nahuatl (Central) Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Northern Puebla) Navajo Ndau Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nepali Ngabere Ngangela Ngbandi (Northern) Nias Nicobarese Norwegian Nsenga (Mozambique) Nyaneka Nyungwe Okpe Oromo Ossetian Otetela Palauan Pangasinan Papiamento (Curaçao) Persian Phimbi Pidgin (West Africa) Polish Ponapean Portuguese Portuguese (Portugal) Punjabi Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quiche Quichua (Chimborazo) Quichua (Imbabura) Rarotongan Romanian Romany (Macedonia) Romany (Macedonia) Cyrillic Romany (Romania) Romany (Serbia) Romany (Southern Greece) Runyankore Russian Russian Sign Language Rutoro Samoan Sango Saramaccan Sena Sepedi Sepulana Serbian Serbian (Roman) Seychelles Creole Shona Sidama Silozi Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Songomeno Spanish Sranantongo Sunda Swati Swedish Tagalog Tahitian Taiwanese Sign Language Talian Tandroy Tankarana Tarascan Telugu Tetun Dili Tewe Thai Tigrinya Tiv Tlapanec Tojolabal Tok Pisin Tongan Totonac Tshiluba Tshwa Tsonga Tswana Turkish Tuvaluan Twi Tzeltal Tzotzil Ukrainian Umbundu Urdu Uruund Valencian Venda Vezo Vietnamese Wallisian Waray-Waray Wayuunaiki Welsh Wolaita Yacouba Yapese Yoruba Zande Zapotec (Isthmus) Zulu
ADESUA ASƐM 41
Yɛsom Onyankopɔn a Ne “Mmɔborɔhunu Dɔɔso”
“Yehowa da ne papayɛ adi kyerɛ obiara, na ne nnwuma nyinaa kyerɛ sɛ ɔwɔ mmɔborɔhunu.”—DW. 145:9.
1. Yɛka obi a ɔwɔ mmɔborɔhunu a, hena ho asɛm na ebia ɛbɛba wo tirim?
SƐ YƐKA obi a ɔwɔ mmɔborɔhunu a, ebia nea ɛbɛba yɛn adwenem ne obi a odwen afoforo ho, obi a ɔwɔ tema, ɔwɔ ayamhyehye, na ne yam ye. Ebia asɛm a Yesu ka faa Samariani yamyefo bi ho no, ɛno nso bɛba yɛn adwenem. Ná saa ɔbarima no fi ɔman foforo so; ohuu Yudani a na akorɔmfo werɛmfo aboro no agye ne ho nneɛma nyinaa no “mmɔbɔ.” Bere a Samariani no huu Yudani a wɔapirapira no no, “ɔyɛɛ no mmɔbɔ,” enti ɔfaa no kɔhwɛɛ no. (Luka 10:29-37) Saa mfatoho yi ma yehu sɛ mmɔborɔhunu yɛ Onyankopɔn su a ɛyɛ fɛ. Esiane sɛ Onyankopɔn dɔ yɛn nti, ohu yɛn mmɔbɔ, na da biara oyi ne mmɔborɔhunu adi kyerɛ yɛn wɔ akwan pii so.
2. Dɛn bio na obi yɛ a ɛkyerɛ sɛ ɔwɔ mmɔborɔhunu?
2 Biribi foforo nso wɔ hɔ a obi yɛ a ɛkyerɛ sɛ ɔwɔ mmɔborɔhunu. Obi a ɔwɔ mmɔborɔhunu no, sɛ ɛsɛ sɛ ɔtwe obi aso na onya nnyinaso papa bi a, otumi twe san. Wei nti, yebetumi aka sɛ Yehowa hu yɛn nyinaa mmɔbɔ, efisɛ “ɔnhwɛ yɛn bɔne ho ne yɛn nni” sɛnea odwontofo no kae no. (Dw. 103:10) Nanso, ɛtɔ da na yɛyɛ bɔne a, Yehowa de ne nan si fam teɛ yɛn so.
3 Adesua yi mu no, yebesusuw nsɛmmisa mmiɛnsa ho: Adɛn nti na Yehowa yi mmɔborɔhunu adi kyerɛ yɛn? Wohwɛ a, obi betumi de ne nan asi fam ateɛ obi so na bere koro no ara yɛaka sɛ wayi mmɔborɔhunu adi akyerɛ no anaa? Dɛn na ebetumi aboa yɛn ama yɛahu afoforo mmɔbɔ? Momma yɛnhwɛ sɛnea Onyankopɔn Asɛm no boa yɛn ma yenya nsɛmmisa yi ho mmuae.
NEA ENTI A YEHOWA DA MMƆBORƆHUNU ADI
4. Adɛn nti na Yehowa da mmɔborɔhunu adi?
4 Yehowa dɔ yɛn nti, ohu yɛn mmɔbɔ. Honhom kaa ɔsomafo Paul ma ɔkyerɛwee sɛ Onyankopɔn “mmɔborɔhunu dɔɔso.” Ɛha yi, nea na Paul reka ho asɛm ne sɛ, Onyankopɔn mmɔborɔhunu nti n’asomfo a bɔne wɔ wɔn ho no, wasra wɔn ama wɔanya anidaso sɛ wɔbɛkɔ soro. (Efe. 2:4-7) Nanso ɛnyɛ n’asomfo a wasra wɔn no nko ara na wayi mmɔborɔhunu adi akyerɛ wɔn. Odwontofo Dawid kaa sɛ: “Yehowa da ne papayɛ adi kyerɛ obiara, na ne nnwuma nyinaa kyerɛ sɛ ɔwɔ mmɔborɔhunu.” (Dw. 145:9) Yehowa dɔ nnipa, enti bere biara a obenya nnyinaso papa bi no, ɔda mmɔborɔhunu adi.
5. Ɛyɛɛ dɛn na Yesu tumi suasuaa Yehowa mmɔborɔhunu?
5 Sɛ yɛreka obi a onim sɛnea Yehowa da mmɔborɔhunu adi paa a, ɛyɛ Yesu. Yehowa ne ne Ba no boom tenaa soro mfe mpempem pii ansa na Yesu reba asaase so. (Mmeb. 8:30, 31) Mpɛn pii no, Yesu huu sɛnea ne papa yii mmɔborɔhunu adi kyerɛɛ nnipa abɔnefo. (Dw. 78:37-42) Yesu nkyerɛkyerɛ mu no, na ɔtaa twe adwene si ne Papa su a ɛyɛ fɛ yi so.
Papa no angu ne ba a ɔkɔbɔɔ ahuhubra no anim ase; ɔsan gyee no baa fie (Hwɛ nkyekyɛm 6) *
6. Mfatoho bɛn na Yesu de boa yɛn ma yɛte sɛnea n’Agya wɔ mmɔborɔhunu no ase?
6 Sɛnea yehui wɔ adesua a edi wei anim mu no, Yesu yɛɛ mfatoho bi a ɛhyɛ nkuran a ɛfa ɔba desɛefo bi ho. Ɔyɛɛ saa mfatoho yi de kyerɛe sɛ Yehowa dɔ yɛn paa, enti ɔda mmɔborɔhunu adi kyerɛ yɛn. Bere a ɔba no fii fie no, “ɔkɔbɔɔ ahuhubra de sɛee n’agyapade no nyinaa.” (Luka 15:13) Akyiri yi, ohui sɛ wayɛ bɔne, enti onuu ne ho, na ɔbrɛɛ ne ho ase san baa fie. Dɛn na na ne papa bɛyɛ? Yesu kaa sɛ: “Bere a [ɔba no da] so ara wɔ akyirikyiri no, ne papa huu no na ɔyɛɛ no mmɔbɔ, na otuu mmirika kɔyɛɛ no atuu, na ofew n’ano.” Papa no angu ne ba no anim ase, mmom ohuu no mmɔbɔ de ne bɔne kyɛɛ no, na ɔsan gyee no toom sɛ ne ba. Bɔne a ɔba desɛefo no yɛe no, na ɛso paa, nanso esiane sɛ onuu ne ho nti, ne papa de kyɛɛ no. Agya mmɔborɔhunufo a ɔwɔ mfatoho no mu no gyina hɔ ma Yehowa. Yesu nam mfatoho a ɛhyɛ nkuran yi so kyerɛɛ yɛn sɛ, sɛ ɔbɔnefo fi ne komam nu ne ho a, n’Agya ayɛ krado sɛ ɔde bɛkyɛ no.—Luka 15:17-24.
7. Sɛnea Yehowa da mmɔborɔhunu adi no, sɛn na ɛma yehu sɛ ne nyansa mu dɔ paa?
7 Yehowa da mmɔborɔhunu adi efisɛ ne nyansa mu dɔ paa. Yehowa nyansa no, ɛnte sɛ nimdeɛ bi a obi aboaboa ano agu ne tirim kɛkɛ. Mmom, Bible ka sɛ ‘nyansa a efi soro no de, mmɔborɔhunu ne aba pa ayɛ no ma.’ (Yak. 3:17) Yehowa te sɛ ɔbaatan a ɔdɔ ne mma, efisɛ onim sɛ ohu n’asomfo mmɔbɔ a, ɛbɛboa wɔn. (Dw. 103:13; Yes. 49:15) Esiane sɛ Yehowa hu wɔn mmɔbɔ nti, ɛma wonya anidaso ɛmfa ho sɛ wɔtɔ sin no. Enti sɛ Yehowa nya biribi a obegyina so ada mmɔborɔhunu adi a, ne nyansa a emu dɔ nti, ɔyɛ saa. Nanso, ɛnyɛ bere nyinaa na Yehowa da mmɔborɔhunu adi. Ne nyansa nti, sɛ ɔda mmɔborɔhunu adi, na ɛbɛkyerɛ sɛ ɔresosɔ bɔne so a, ɔnyɛ saa.
8. Ɛtɔ da a, dɛn na ehia sɛ yɛyɛ, na adɛn ntia?
8 Yɛmfa no sɛ Onyankopɔn somfo bi ahyɛ da sɛ obebu brabɔne. Dɛn na ɛsɛ sɛ yɛyɛ? Onyankopɔn honhom kaa Paul ma ɔkyerɛwee sɛ: “Mo ne no mmmɔ.” (1 Kor. 5:11) Abɔnefo a wonnu wɔn ho no, wotu wɔn fi asafo no mu. Ɛho hia sɛ yɛyɛ saa sɛnea ɛbɛyɛ a ɛbɛbɔ anuanom a aka a wɔde nokwaredi resom Yehowa no ho ban. Afei nso, ɛno bɛkyerɛ sɛ yɛde Yehowa akwankyerɛ reyɛ adwuma. Nanso ebinom adwene yɛ wɔn sɛ, sɛ wotu obi fi asafo no mu a, ɛkyerɛ sɛ Onyankopɔn anhu no mmɔbɔ. Ɛyɛ ampa anaa? Momma yɛnhwɛ sɛ saa na ɛte anaa.
YƐDE YƐN NAN SI FAM TEƐ OBI SO A, ƐYƐ MMƆBORƆHUNU ANAA?
Ɛwom sɛ oguan bi yare a woyi no fi nguankuw no mu, nanso oguanhwɛfo no kɔ so hwɛ no (Hwɛ nkyekyɛm 9-11)
9-10. Sɛnea Hebrifo 12:5, 6 ma yehu no, adɛn nti na yebetumi aka sɛ, sɛ wotu obi a, ɛyɛ mmɔborɔhunu? Ma mfatoho.
9 Sɛ yɛkɔ Kristofo nhyiam na wɔde to gua sɛ obi a yenim no na yɛdɔ no “nyɛ Yehowa Danseni bio” a, etumi ma yɛn werɛ how paa. Ebia yɛn adwene mpo bɛyɛ yɛn sɛ anka ɛnsɛ sɛ wotu no. Sɛ wotu obi a, ɛkyerɛ mmɔborɔhunu anaa? Yiw. Sɛ ɛfata sɛ yɛteɛ obi so na sɛ yɛanyɛ saa a, nyansa nnim. Ɛkyerɛ nso sɛ yɛanhu no mmɔbɔ, na yɛanna ɔdɔ adi ankyerɛ no. (Mmeb. 13:24) Sɛ obi yɛ bɔne na wannu ne ho na wotu no a, ebetumi ama wasesa ne suban anaa? Yiw, ebetumi ama wasesa. Wɔn a wɔyɛɛ bɔne a emu yɛ duru ma wotuu wɔn no bebree abehu sɛ, ade a na wohia ara na mpanyimfo no de wɔn nan sii fam yɛe no, efisɛ ɛmaa wɔn ani baa wɔn ho so, wɔsesaa wɔn akwan, na wɔsan baa Yehowa nkyɛn.—Kenkan Hebrifo 12:5, 6.
10 Momma yɛnhwɛ mfatoho bi. Oguanhwɛfo bi ahu sɛ ne guan baako yare. Onim sɛ, sɛ obetumi asa saa yare no a, gye sɛ oyi oguan a ɔyare no fi nguankuw no mu. Nguan de, wɔmpɛ sɛ wɔbɛtew wɔn ho afi nguankuw no ho. Enti sɛ obi yi wɔn fi mu a, wɔn ani so betumi atan wɔn. Nanso, sɛ oguanhwɛfo no yi oguan a ɔyare no fi nguankuw no mu kɔsa no yare a, ɛkyerɛ sɛ ne tirim yɛ den anaa? Ɛnte saa koraa. Mmom onim sɛ, sɛ ogyaw oguan a ɔyare no wɔ nguankuw no mu a, ɔde yare no bɛsan wɔn a aka no. Nanso sɛ oyi oguan a ɔyare no fi wɔn mu a, ɛbɛbɔ nguan a aka no nyinaa ho ban.—Fa toto Leviticus 13:3, 4 ho.
11. (a) Ɔkwan bɛn so na obi a wɔatu no te sɛ oguan a ɔyare? (b) Nhyehyɛe bɛn na ɛwɔ hɔ a ebetumi aboa wɔn a wɔatu wɔn?
11 Sɛ wotu Kristoni bi a, yebetumi de no atoto saa oguan a ɔyare no ho. Ɔyare wɔ honhom mu, kyerɛ sɛ ɔne Yehowa ntam asɛe. (Yak. 5:14) Sɛnea yare bi tumi san no, saa ara na obi nso yare wɔ honhom mu a, otumi de san nkurɔfo. Enti ɛtɔ da a ɛho hia sɛ woyi nea ɔyare wɔ honhom mu no fi asafo no mu. Saa nteɛso yi kyerɛ sɛ Yehowa dɔ Kristofo a wɔaka a wɔde nokwaredi resom no no, na ebia ɛbɛka ɔbɔnefo no ma wasakra n’adwene. Nea wɔatu no no betumi aba adesua na wanya Bible nkyerɛkyerɛ a ebetumi asan ahyɛ ne gyidi den. Afei nso, obetumi agye nhoma akɔkenkan na wahwɛ JW Broadcasting®. Sɛ mpanyimfo no hu sɛ ɔrebɔ mmɔden sɛ ɔbɛsesa ne suban a, ɛwom ara a, wobetumi de afotu ne akwankyerɛ a ɛbɛboa no ama no. Wei bɛma wasiesie ɔne Yehowa ntam sɛnea ɛbɛyɛ a wobetumi asan agye no aba asafo no mu. *
12. Sɛ ɔbɔnefo bi annu ne ho a, dɛn na mpanyimfo no bɛyɛ de akyerɛ sɛ wɔdɔ no, na wada mmɔborɔhunu adi akyerɛ no?
12 Ɛsɛ sɛ yɛkae sɛ, sɛ obi yɛ bɔne na wannu ne ho a, ɛnna wotu no fi asafo no mu. Mpanyimfo no nim sɛ wei yɛ aniberesɛm, enti wɔmpere wɔn ho ntu obi mfi asafo no mu. Wonim sɛ Yehowa teɛ obi so a, ɔyɛ no “sɛnea ɛfata.” (Yer. 30:11) Wɔdɔ wɔn nuanom, na wɔmpɛ sɛ wɔbɛyɛ biribiara a ɛbɛma wɔne Yehowa ntam asɛe. Nanso ɛtɔ da a, sɛ wotu obi fi asafo no mu a, ɛno na ɛkyerɛ sɛ wɔdɔ no na wɔada mmɔborɔhunu adi akyerɛ no.
13. Adɛn nti na na ehia sɛ wotu Kristoni bi a na ɔwɔ Korinto?
13 Bere a ɔbɔnefo bi annu ne ho wɔ asomafo no bere so no, yɛnhwɛ nea ɔsomafo Paul yɛe. Kristoni bi a ɔwɔ Korinto gyee ne papa yere. Ná wei yɛ abusude paa! Ná Yehowa aka akyerɛ tete Israelfo no sɛ: “Ɔbarima a ɔne ne papa yere bɛda no agu ne papa anim ase. Wonkum wɔn baanu nyinaa.” (Lev. 20:11) Ɛwom, na Paul rentumi nka sɛ wonkum ɔbarima no, nanso ɔka kyerɛɛ Korintofo no sɛ wontu no mfi asafo no mu. Ná saa ɔbarima no brabɔne no resɛe afoforo wɔ asafo no mu. Ná asafo no mufo bi mpo nhu sɛ ɛyɛ bɔne a anibere wom!—1 Kor. 5:1, 2, 13.
14. Dɛn na Paul yɛe a ɛkyerɛ sɛ ohuu ɔbarima a wotuu no wɔ Korinto no mmɔbɔ, na adɛn nti na ɔyɛ saa? (2 Korintofo 2:5-8, 11)
14 Bere bi akyi no, Paul tee sɛ ɔbarima no ayɛ nsakrae paa. Ná ɔbɔnefo no anu ne ho ampa! Ɛwom sɛ na ɔbarima no ama asafo no anya dimmɔne de, nanso Paul ka kyerɛɛ mpanyimfo no sɛ ɔmpɛ sɛ ɔne ɔbɔnefo no bedi no atirimɔden so. Enti ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Munyi mo yam mfa nkyɛ no, na monkyekye ne werɛ.” Adɛn nti na Paul kaa saa? Sɛnea ɛbɛyɛ a ‘awerɛhow bebrebe renhyɛ no so.’ Paul nyaa ayamhyehye maa ɔbarima a na wanu ne ho no. Ná ɔsomafo no mpɛ sɛ bɔne a ɔbarima no yɛe no bɛhyɛ ne so, anaa obedi awerɛhow ara ma n’abam abu. Ɛba saa a, ebia ɔrenhwehwɛ bɔnefakyɛ.—Kenkan 2 Korintofo 2:5-8, 11.
15. Dɛn na mpanyimfo no yɛ a ɛbɛkyerɛ sɛ wɔde wɔn nan asi fam na bere koro no ara wɔada mmɔborɔhunu adi?
15 Sɛnea Yehowa dɔ yɛn nti ohu yɛn mmɔbɔ no, saa ara na mpanyimfo no nso pɛ sɛ wɔyɛ. Sɛ ɛho hia sɛ mpanyimfo no teɛ obi so a, wɔde wɔn nan si fam yɛ saa, nanso sɛ wohu sɛ biribi wɔ hɔ a wobetumi agyina so ada mmɔborɔhunu adi a, wɔyɛ saa. Sɛ ɛsɛ sɛ mpanyimfo no teɛ no so na sɛ wɔanyɛ a, ɛnde na ɛnyɛ mmɔborɔhunu, na mmom na wɔreboa bɔne. Nanso asafo mu mpanyimfo nko ara na ɛsɛ sɛ wɔda mmɔborɔhunu adi anaa?
DƐN NA EBETUMI ABOA YƐN NYINAA AMA YƐADA MMƆBORƆHUNU ADI?
16. Sɛnea Mmebusɛm 21:13 kyerɛ no, sɛ obi anhu afoforo mmɔbɔ a, dɛn na Yehowa bɛyɛ no?
16 Kristofo nyinaa pɛ sɛ wosuasua Yehowa mmɔborɔhunu. Adɛn ntia? Ade baako ne sɛ, wɔn a wonhu afoforo mmɔbɔ no, Yehowa rentie wɔn. (Kenkan Mmebusɛm 21:13.) Yɛn mu biara pɛ sɛ Yehowa tie ne mpaebɔ, enti yɛyɛ nea yebetumi biara sɛ yebehu afoforo mmɔbɔ. Sɛ yɛn nua bi a ɔrehu amane ka ne haw kyerɛ yɛn a, ɛnsɛ sɛ yebu nnua gu yɛn asom, mmom ɛsɛ sɛ bere nyinaa yɛyɛ krado sɛ yebetie “mmɔborɔwafo su.” Saa ara na yɛbɔ mmɔden sɛ yɛde Bible mu afotu yi bɛyɛ adwuma: “Nea onhu nnipa mmɔbɔ no, ɔno nso wɔrenhu no mmɔbɔ wɔ atemmu mu.” (Yak. 2:13) Sɛ yɛbrɛ yɛn ho ase gye tom sɛ ehia sɛ wohu yɛn mmɔbɔ a, yɛn nso ɛbɛyɛ mmerɛw ama yɛn sɛ yebehu afoforo mmɔbɔ. Bere a ɛsɛ sɛ yehu obi mmɔbɔ paa ne bere a ɔbɔnefo a wanu ne ho asan aba asafo no mu no.
17. Dɛn na Ɔhene Dawid yɛe a ɛkyerɛ sɛ na ɔwɔ mmɔborɔhunu paa?
17 Bible mu nhwɛso pii wɔ hɔ a ebetumi aboa yɛn ma yɛahu nkurɔfo mmɔbɔ, na yɛne wɔn anni no atirimɔden so. Momma yɛmfa Ɔhene Dawid nyɛ nhwɛso. Ná ɔtaa hu nkurɔfo mmɔbɔ paa. Ɛwom sɛ na Saul repɛ Dawid akum no, nanso Dawid huu no mmɔbɔ, efisɛ na ɔyɛ ɔhene a Onyankopɔn asra no. Dawid anyɛ n’adwene da sɛ ɔbɛyɛ bi atua no ka.—1 Sam. 24:9-12, 18, 19.
18-19. Bere bɛn ne bere bɛn na Dawid anna mmɔborɔhunu adi?
18 Nanso, ɛnyɛ bere nyinaa na Dawid huu nkurɔfo mmɔbɔ. Ɛho nhwɛso ne nea ɛkɔɔ so wɔ ɔne Nabal ntam no. Ná Nabal asɛm mfa kwan mu koraa. Dawid somae sɛ wonkogye aduan kakra wɔ ne nkyɛn mmrɛ ɔne ne mmarima no, nanso Nabal didii wɔn atɛm pɔtɔɔ pam wɔn ma wɔde nsapan kɔe. Bere a Dawid tee asɛm no, ne bo fuwii paa na ɔyɛe sɛ ɔbɛkɔ akokum Nabal ne mmarima a ɛwɔ ne fie nyinaa. Sɛ ɛnyɛ sɛ Nabal yere Abigail a na ɔwɔ abotare na ne yam ye no yɛɛ asɛm no ho biribi ntɛm a, anka Dawid dii mogya ho fɔ.—1 Sam. 25:9-22, 32-35.
19 Bere bi nso, odiyifo Natan kaa osikani bi a ɔkɔfaa ohiani bi guan ho asɛm kyerɛɛ Dawid. Dawid tee no, ɔde abufuw kɛse kaa sɛ: “Sɛ́ Yehowa te ase yi, ɔbarima a ɔyɛɛ saa no fata owu!” (2 Sam. 12:1-6) Ná Dawid nim nea ɛwɔ Mose Mmara no mu. Ɛne sɛ, sɛ obi wia oguan a, na ɛsɛ sɛ ɔde nnan hyɛ anan. (Ex. 22:1) Nanso kumfɔ a na Dawid reka ho asɛm yi de, antwa yiye. Ná atemmu no ano yɛ hyew. Nea na Natan reka no, sɛɛ na ɛyɛ mfatoho a ɔde reboa Dawid ma wahu sɛ bɔne a wayɛ no so sen osikani no de koraa. Mmɔborɔhunu a Yehowa yii no adi kyerɛɛ Dawid no, na ɛsen mmɔborɔhunu a anka Dawid beyi no adi akyerɛ osikani a ɔwɔ Natan mfatoho no mu no!—2 Sam. 12:7-13.
Osikani a na ɔwɔ Natan mfatoho no mu no, Ɔhene Dawid anyi mmɔborɔhunu adi ankyerɛ no (Hwɛ nkyekyɛm 19-20) *
20. Nea Dawid yɛe no, dɛn na yebetumi asua afi mu?
20 Hyɛ no nsow sɛ bere a Dawid bo fuwii no, ɔkaa sɛ Nabal ne ne mmarima no nyinaa fata owu. Akyiri yi nso, Dawid kaa sɛ ɛsɛ sɛ wokum osikani a na ɔwɔ Natan mfatoho no mu no. Nhwɛso a ɛto so mmienu yi mu no, yenhu nea enti a ɔbarima a yenim no sɛ ɔwɔ ayamhyehye sɛɛ bebu atɛn atirimɔden so saa. Ma yɛnhwɛ nea na ɛrekɔ so wɔ Dawid asetenam saa bere no. Ná Dawid ahonim reteetee no. Sɛ obi bu atɛn a ano yɛ hyew a, ɛkyerɛ sɛ ɔne Yehowa ntam asɛe. Yesu bɔɔ n’akyidifo kɔkɔ denneennen sɛ: “Munnyae sɛ mubu nkurɔfo atɛn, na wɔammu mo atɛn. Na atɛn a mubu no, ɛno ara na wobebu mo.” (Mat. 7:1, 2) Enti, momma yɛnkɔ so nsuasua yɛn Nyankopɔn a ne “mmɔborɔhunu dɔɔso” no, na yɛnhwɛ yiye na yɛne nkurɔfo anni no atirimɔden so.
21-22. Nneɛma pɔtee bɛn na yebetumi ayɛ de akyerɛ sɛ yɛwɔ mmɔborɔhunu?
21 Mmɔborɔhunu nyɛ atenka bi kɛkɛ. Mmom sɛ “ayamhyehye ka obi ma ɔyɛ ade boa afoforo” a, ɛno ne mmɔborɔhunu. Ɛno nti, ɛsɛ sɛ yɛn nyinaa de yɛn ani to fam hwehwɛ wɔn a wohia mmoa wɔ yɛn abusua mu, yɛn asafo mu, ne baabi a yɛte. Yɛyɛ saa a, ɛbɛma yɛanya nnipa bebree a yebetumi ayi mmɔborɔhunu adi akyerɛ wɔn. Obi hia awerɛkyekye anaa? Yebetumi akɔma no aduan anaa yɛayɛ biribi foforo de aboa no anaa? So yebetumi afa obi a wɔasan agye no adamfo na yɛakyekye ne werɛ? Yebetumi aka asɛmpa no akyerɛ nkurɔfo de akyekye wɔn werɛ anaa? Wei yɛ ɔkwan baako a eye paa a yebetumi afa so ayi mmɔborɔhunu adi akyerɛ obiara a yehyia no.—Hiob 29:12, 13; Rom. 10:14, 15; Yak. 1:27.
22 Sɛ yɛde yɛn ani to fam a, yebehu sɛ hokwan a yɛde beyi mmɔborɔhunu adi akyerɛ nkurɔfo atwa yɛn ho ahyia. Sɛ yeyi mmɔborɔhunu adi kyerɛ nkurɔfo a, yɛn soro Agya a ɔyɛ Onyankopɔn a ne “mmɔborɔhunu dɔɔso” no, hwɛ sɛnea n’ani begye afa!
Adɛn nti na Yehowa hu nkurɔfo mmɔbɔ?
Dɛn na ɛkyerɛ sɛ obi betumi de ne nan asi fam ateɛ obi so na bere koro no ara yɛaka sɛ wayi mmɔborɔhunu adi akyerɛ no?
Dɛn na ɛbɛboa yɛn ma yɛahu nkurɔfo mmɔbɔ?
DWOM 43 Aseda Mpaebɔ
^ nky. 5 Yehowa su a ɛyɛ fɛ no, baako ne mmɔborɔhunu, na ɛyɛ su a ɛsɛ sɛ yɛn mu biara nya. Adesua yi mu no, yɛbɛhwɛ nea enti a Yehowa da mmɔborɔhunu adi kyerɛ yɛn. Afei nso, yɛbɛhwɛ nea enti a yebetumi aka sɛ, sɛ Yehowa reteɛ obi so a, ohu no mmɔbɔ. Ɛno akyi no, yɛbɛhwɛ sɛnea yebetumi ada mmɔborɔhunu adi.
^ nky. 11 Sɛ wopɛ sɛ wuhu sɛnea wɔn a wɔasan agye wɔn aba asafo no mu betumi asiesie wɔne Onyankopɔn ntam ne sɛnea mpanyimfo no betumi aboa wɔn a, hwɛ asɛm a yɛato din “Sɛnea Wobɛsan Asiesie Wo Ne Yehowa Ntam” a ɛwɔ Ɔwɛn-Aban yi mu no.
^ nky. 60 MFONI HO NKYERƐKYERƐMU: Papa no gyina ne dan atifi, na wahu sɛ ne ba a ɔkɔbɔɔ ahuhubra no resan aba fie, na wayɛ ntɛm asi fam rekɔyɛ no atuu.
^ nky. 64 MFONI HO NKYERƐKYERƐMU: Ɔhene Dawid bɔne nti, n’ahonim reteetee no, ɛno nti ɔde abufuw reka sɛ osikani a na ɔwɔ Natan mfatoho no mu no fata owu.
Share Share Yɛsom Onyankopɔn a Ne “Mmɔborɔhunu Dɔɔso”
w21 October kr. 8-13
ADESUA ASƐM 40 Dɛn Na Ɛkyerɛ Sɛ Obi a Wayɛ Bɔne Anu Ne Ho Ampa?
ADESUA ASƐM 41 Yɛsom Onyankopɔn a Ne “Mmɔborɔhunu Dɔɔso”
Sɛnea Wobɛsan Asiesie Wo Ne Yehowa Ntam
ADESUA ASƐM 42 Nya Ahotoso Paa Sɛ Woahu Nokware No
ADESUA ASƐM 43 Mpa Abaw!
1921—Mfe Ɔha a Atwam
Text Baabi a wubetumi atwe nneɛma akenkan ƆWƐN-ABAN—NEA ADESUA NSƐM WOM October 2021
Audio Baabi a wubetumi atwe nneɛma abɔ atie ƆWƐN-ABAN—NEA ADESUA NSƐM WOM October 2021
Share Share ƆWƐN-ABAN—NEA ADESUA NSƐM WOM October 2021
ƆWƐN-ABAN—NEA ADESUA NSƐM WOM October 2021